Activities – Page2– Than Lwin
သံလွင်နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်အဖွဲ့ကစီစဉ်သည့် ကောင်းမွန်သောဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးစိီမံချက်(ဖျာပုံခရိုင်/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖြစ် (ဒေးဒရဲမြို့နယ်)အတွင်း လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကိုRead More →
သံလွင်နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်အဖွဲ့ကစီစဉ်သည့် ကောင်းမွန်သောဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးစိီမံချက်(ဖျာပုံခရိုင်/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖြစ် (ဘိုကလးမြေို့နယ်)အတွင်း လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကိုRead More →
သံလွင်နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်အဖွဲ့ကစီစဉ်သည့် ကောင်းမွန်သောဒေသန္တရစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးစီိမံချက်(ဖျာပုံခရိုင်/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အဖြစ် ကျိုက်လတ်မြို့နယ်အတွင်း လူထုသဘောထားအမြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအစီအစဉ်ကို ဒေသခံ ရောင်နီဦးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ( ၂၃ – ၂၄-၂၅-၂၆ ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၉၊ ) လေးရက်တာကျင်း့ပခဲ့သည်။ ၎င်း စစ်တမ်းကို ဖျာပုံခရိုင်ရှိ ကျိုက်လတ်၊ ဘိုးကလေး၊ ဒေးဒရဲနှင့်ဖျာပုံမြို့နယ်များတွင် ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ စစ်တမ်းကို ကျိုက်လတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ (၂)ရက်ကွက်၊ (၃)ရပ်ကွက်နှင့် (၆)ရပ်ကွက်များရှိ လူထုလူတန်းစားအလွှာအသီးသီးအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းကောက်ယူခဲ့သည်။ ယင်းသို့ကောက်ယူရာတွင် ဒေသခံရောင်နီဦးအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြပါသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် ကူညီပေးခဲ့ကြသော ဒေသခံပြည်သူများနှင့်ရာင်နီဦးအမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သံလြင္ႏုိင္ငံသားစြမ္းရည္ျမွင့္အဖြဲ႕ကစီစဥ္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာေဒသႏၱရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအခန္းက႑ျမွင့္တင္ေရးစီိမံခ်က္(ဖ်ာပုံခရုိင္/ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀)အျဖစ္ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူထုသေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းအစီအစဥ္ကို ေဒသခံ ေရာင္နီဦးအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၀င္မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ ( ၂၃ – ၂၄-၂၅-၂၆ ရက္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၉၊ ) ေလးရက္တာက်င္း့ပခဲ့သည္။ ၎ စစ္တမ္းကို ဖ်ာပုံခရုိင္ရွိ က်ဳိက္လတ္၊ ဘုိးကေလး၊ ေဒးဒရဲႏွင့္ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းကို က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ (၂)ရက္ကြက္၊ (၃)ရပ္ကြက္ႏွင့္ (၆)ရပ္ကြက္မ်ားရွိ လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးအား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းေကာက္ယူခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ေကာက္ယူရာတြင္ ေဒသခံေရာင္နီဦးအမ်ဳိးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ တက္ႀကြစြာပူးေပါင္းပါ၀င္ကူညီေပးခဲ့ၾကပါသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ရာင္နီဦးအမ်ဳိးသမီးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။Read More →
လူထုသေဘာထားအျမင္မ်ားေကာက္ယူေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ (13-Sep.2019)
သံလွင်နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်အဖွဲ့က စီစဉ်သော ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းပြုလုပ်မည့် နိုင်ငံသားများပူးပေါင်းပါဝင်မှု မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်သော ဒေသန္တရ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဖြစ်ထွန်းအားကောင်းလာရေးစီမံချက် အတွက် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် ဒေသခံ ပြည်သူတို့၏အမြင်နှင့် သဘောထား စစ်တမ်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်များကောက်ယူရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ( ၁၃ – ၁၄- ၁၅ ရက်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၉) နေ့ရက်များက ဖျာပုံမြို့၊ သီရိအဏ္ဏဝါခန်းမတွင် သုံးရက်တာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။Read More →
သံလွင်အဖွဲ့ကစီစဉ်သည့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးတွင် နိုင်ငံသားများ၏အခန်းကဏ္ဍပိုမိုပါဝင်လာနိုင်ရေး သုတေသနဆိုင်ရာသင်တန်း တခုကို GRAND LAUREL HOTEL တွင် ၂၇. ၇. ၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၃၀. ၇. ၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ လေးရက်တာကျင်းပခဲ့သည်။ သင်တန်းတွင် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီး ဦးမြင့်သွင်က ရပ်ကျေးဥပဒေနှင့် အခြေခံဥပဒေရေးရာများကိုလည်းကောင်း၊ ဆရာဦးရဲအောင်နှင့် ဦးသီဟသူက ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးတွင်နိုင်ငံသားများပိုမိုပါဝင်လာနိုင်ရေးနှင့် သုတေသလုပ်ငန်းဆိုင် ဆောင်ရွက်ချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသို့ ရန်ကုန်နှင့် ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းမှ ဒေးဒရဲ၊ ကျိုက်လတ်၊ ဘိုကလေး၊ ဖျာပုံမြို့နယ်များမှ အရပ်ဘက်အဖွဲ့စည်းကိုယ်စားလှယ် ၂၀ ဦးတက်ရောက်ခဲ့သည်ပြီး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ သုတေသနမေးခွန်းများအချင်းချင်းမေးမြန်းခြင်း များပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။Read More →
Good Local Governance and Role of Civil Society Workshop(Yangon)
ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍ (ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊)( ၁၇. ၅. ၂၀၁၉)
ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍ ဖိုရမ်(ကျိုက်လတ်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး) ၁၁. ၅ .၂၀၁၉
ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ေဆြးေႏြးပြဲ ၃၀ . ၄ . ၂၀၁၉ (သုခ၀တီခန္းမ)
“ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ’’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃၀. ၄. ၂၀၁၉) ရက္ေန႔က သံလြင္(Citizen Empowerment Program) အဖြဲ႕မွဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးသီဟသူႏွင့္ ဦးသြင္လင္းေအာင္တုိ႔က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ လည္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ (၅၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ Read More →
ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕ဖိုရမ္(ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး) 23 3. 2019
သံလြင္(ႏုိင္ငံသားစြမ္းရည္ျမွင့္)အဖြဲ႕က ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အရပ္ဘက္… Posted by Than Lwin Citizen Empowerment Program on Monday, March 25, 2019Read More →